मानुषी लघुवित्तको आईपीओ: कहिले हुन्छ बाँडफाँड ?, कति पर्यो आवेदन ? यसो भन्छ क्यापिटल - DURBAR TIMES
HomeShare Bazarमानुषी लघुवित्तको आईपीओ: कहिले हुन्छ बाँडफाँड ?, कति पर्यो आवेदन ? यसो...
मानुषी लघुवित्तको आईपीओ: कहिले हुन्छ बाँडफाँड ?, कति पर्यो आवेदन ? यसो भन्छ क्यापिटल
काठमाण्डौ । मानुषी लघुवित्तले गत साउन २७ गतेदेखि साउन ३१ गतेसम्म आईपीओ बिक्री गरेको थियो।
धितोपत्र बिक्री प्रबन्धक नेपाल एसबिआई मर्चेन्ट बैंकिङ लिमिटेडका अनुसार आगामी साताभित्र मानुषी लघुवित्तको आईपीओ बाँडफाँड गर्ने काम भइरहेको छ। ‘अहिले प्रिअलटमेन्टको काम भइरहेको छ, शुक्रबारसम्म प्रिअलटमेन्ट काम सकिन्छ’, नेपाल एसबिआई मर्चेन्टका एक अधिकारीले भने, ‘सम्भवतः आगामी साता बुधबार वा बिहीबारसम्म आईपीओ बाँडफाँड गरिनेछ।’
अन्तिम दिनसम्म यो आईपीओमा २४ लाख ३ हजार ५५ आवेदकबाट ३ करोड ६ लाख ३२ हजार ४३० कित्ता सेयर माग भएको थियो। जुन मागभन्दा ८३.१० गुणा बढी हो।
यो आईपीओमा गोलाप्रथाबाट ३६ हजार ८५९ जनाले १० कित्ताका दरले सेयर पाउनेछन् भने तिनै आवेदकमध्ये १० कित्ता बढी आवेदन दिने भाग्यमानी ३ जनाले थप १/१ कित्ता सेयर पाउनेछन्। यो आईपीओमा साढे २३ लाख बढी आवेदकको हात खालि हुने भएको छ।
Previous articleसंस्थापक सेयर बिक्री गर्दै सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक
Next articleदोहोरो अंकको गिरावट आएको नेप्सेमा यी हुन् सबैभन्दा बढी कमाउने र गुमाउने कम्पनी